I-Kiss-Egqwesileyo kunye neLoft yesiXeko esiTofotofo
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguGuestia
Wamkelekile kwindawo yethu ekhethekileyo kunye nenencasa yodidi oluphezulu olunencasa- kanye entliziyweni yeVienna ecaleni kweNaschmarkt yodumo! Idizayinwe ngothando oluninzi kunye nengqalelo kwiinkcukacha, ukuya kuthi ga kwisithandathu sabantu abanokufumana indawo apha ukuze bazive bekhululekile kwaye baphonononge isixeko. Le flethi yahlulahlulwe ngokugqibeleleyo kumanqanaba amabini, enamagumbi amabini okulala apholileyo anebhedi ephindwe kabini, indawo yokuhlala esimemayo kunye negumbi lokuhlambela ezimbini ezahlukeneyo. Ngapha koko, kukho ibhedi yesofa ekhululekileyo, ebonelela ngeendlela ezimbini zokulala ezongezelelweyo.
Indawo yokuhlala kunye neyokutyela yeloft ihonjiswe ngomzobo othi "Die Kiss" nguGustav Klimt, obeka ithoni yesitayile seflethi yonke. Ukongeza, ikhitshi ekumgangatho ophezulu ikumema ukuba upheke kwaye ukonwabele iingokuhlwa ezimnandi nabahlobo kunye nosapho.
Iflethi ilungele abakhenkethi, abahambi beshishini & neentsapho. Ibekwe kufutshane neNaschmarkt, eMariahiilferstraße kunye nombindi wesixeko. Ngaphaya koko, iindawo ezibonwayo zeSchönbrunn Palace, iBelvedere Palace kunye neentlobo ngeentlobo zeemyuziyam zifikeleleka lula.
Kummandla okufutshane, kukho izikhululo ezintathu eziphantsi komhlaba (Karlsplatz, Taubstummengasse, Kettenbrückenngasse) kunye nezikhululo ezininzi zetram. Ungafikelela kuyo yonke into ngokulula kakhulu ngeenyawo, kwaye kukho iindawo zokutyela ezinkulu kunye nemivalo ekufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Guestia
Iqela lethu leeNdwendwe liya kukukhathalela ngaphambi, ngexesha nasemva kokuhlala kwakho. Ungaqhagamshelana nathi ngencoko okanye kwiimeko ezingxamisekileyo ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wien